Dual Boot install Backtrack5| Shwekoyantaw
Published : 5:10 AM Author : shwekoyantaw
Backtrack5ကို ကျွန်တော် Window7နဲ့တွဲတင်နည်းလေးရေးပေးပါ့မယ်မခက်ပါဘူး လွယ်ပါတယ်တော်တော့်ကိုလွယ်ပါတယ် အရင်ဆုံး Backtrack5ကို Live အနေနဲ့ Boot တက်လိုက်ပါ နောက် startx ကိုနှိပ်ပြီး ၀င်လိုက်ပါ ပြီးရင် Backtrack5ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်နောက် Desktop ပေါ်မှာရှိတဲ့ Install Backtrack ဆိုတဲ့ icon ကိုနှိပ်ပြီး Install လုပ်ဖို့ပြင်ဆင် ပါ ………..ပုံမှာပြထားပါတယ် ……….:P
ပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်းပဲ next ကိုနှိပ်လိုက်ပါ…….နောက်တစ်ပုံကိုကြည့်ပါ……….
ပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်းပဲ Region နဲ့ Time Zone ကိုပြောင်းပေးလိုက်ပါနောက် Next ကိုနှိပ်ပါ………
ကျွန်တော်တို့ က Partitions ကိုအသစ်နဲ့ခွဲတင်ပါမယ် အဲ့ဒါကြောင့် Specify partitions manually (advanced) ကိုရွေးလိုက်ပါ အောက်မှာပြထားတဲ့အတိုင်း Box လေးကျလာပါလိမ့်မယ်
ကိုယ်ထားချင်တဲ့ Amount လောက်ထားလိုက်ပါ အရေးကြီးတာက mount point နေရာမှာ / လေးကိုရွေးပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်….နောက် OK ကိုနှိပ်ပါ တစ်ခါ ကျွန်တော်လောလောနဲ့ကျန်ခဲ့တာရှိပါတယ် swap file ကိုလဲ 1 Gb လောက်ထားပေးလိုက်ပါ Specify partitions manually (advanced) ကိုရွေးလိုက်ပါ အပေါ်ကနဲ့တူတူပါပဲ mount point နေရာမှာ swap ကိုရွေးပေးပါ အဲ့ဒါဆိုရပါပြီနောက် OK ကိုနှိပ်ပါ……
သွင်းပြီးတဲ့အထိစောင့်ပါ အားလုံးပြီးသွားရင်အောက်ကအတိုင်းပဲ ပေါ်လာပါလိမ့်မယ် အဲ့ခါကျရင် Restart လုပ်လိုက်ပါ ပြန်တက်လာရင် Dual Boot နဲ့တက်လာပါလိမ့်မယ်
Default username and password က root/ toor ဖြစ်ပါတယ် နောက် Graphic interface ကို run ဖို့အတွက် Startx လို့ command ပေးရပါမယ်…… အဲ့လောက်ဆိုအဆင်ပြေ မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ် ကျွန်တော်တို့သည်လည်းအရမ်းကိုတော်နေတတ်နေတဲ့သူများမဟုတ်ကြပါ သာမန်လေ့လာသူအဆင့်လောက်သာရှိပါသေးတယ် ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်တို့ သိသမျှ တတ်သမျှလေးတွေကို သူငယ်ချင်းများအားလုံးအလွယ်တကူလေ့လာနိုင်အောင် ရေးတင်ပေးထားခြင်းသာဖြစ်ပါတယ် အားလုံးပဲအဆင်ပြေတာမပြေတာလေးတွေကို comment လေးတွေထားပေးခဲ့စေချင်ပါတယ်……ဒီပိုစ့်ဖြင့် သင်ဆရာ ၊ မြင်ဆရာ ၊ ကြားဆရာများအားလုံးကို ဂါရ၀ပြုလိုက်ပါတယ်…………:P
မှတ်ချက်။ ။မေးစရာရှိသေးပါကလဲ အောက်ပါလင့်ဝင် ၀င်ရောက်မေးနိုင်ပါသည်.....။